Vlamertinge - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Vlamertinge bụ obodo dị n'ógbè Belgium nke West Flanders na obodo Ypres. Obodo nta nke Vlamertinge dị nnọọ n'azụ obodo Ypres, n'okporo ụzọ N38 gaa n'obodo dị nso nke Poperinge.
Na mgbakwunye na obodo Ypres n'onwe ya, Vlamertinge bụ obodo kachasị ukwuu nke Ypres. N'ebe ọdịda anyanwụ nke Vlamertinge, n'okporo ụzọ Poperinge, bụ ebe obibi nke Brandhoek.
3 Omuma ihe omuma
Ihe mbụ banyere Vlamertinge bụ site na oge ochie. Na 857 e wuru otu ụlọ ụka na Vlamertinge. Na 970 Ypres bibiri na ụlọ nsọ nke Vlamertinge ọkụ ala. Akwụkwọ ochie, bụ nke a maara n'oge a, nke gụnyere aha Flambertenges, bụ akwụkwọ nke afọ 1066. Baudouin van Lille, ndị Flanders, nwunye ya Adela na nwa ha nwoke bụ Baudouin, natara akwụkwọ a na chọọchị site na Sint-Pieters na Lille. Ngwa ndị a, n'ime ihe ndị ọzọ, otu ụzọ n'ụzọ iri dị na Elverdinge nakwa otu ụzọ n'ụzọ iri dị na Vlamertinge - "In territorio Furnensi, in villa Elverzenges, decinam unam ; Flambertenges decinam similiter unam ".
N'okpuru Ụkpụrụ Oge Ochie Vlamertinge bụ ebube nke Veurne-Ambacht na 22 n'azụ na ahụhụ dị ukwuu site na nnọchibido nke Ypres dị nso.
Geography[mezie | dezie ebe o si]
Vlamertinge dị mita 17 n'elu elu igwe. Obodo ahụ nwekwara ókèala Ypres na East, Voormezele na Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ, Kemmel na Dikkebus na Ndịda, Reningelst na Southwest, Poperinge na West, Elverdinge na North na Brielen na Northeast.
Omuma ihe omuma[mezie | dezie ebe o si]
Site na 1487 ruo 1697, anyị na-ahụ nnukwu ọdịda nke ndị bi na Vlamertinge. Nkọwa kachasị mma maka nke a ga-abụ afọ 80 nke afọ 'Agha na Netherlands. N'oge Agha Ụwa Mbụ, anyị na-ahụ na ndị mmadụ na-alaghachi azụ. Nke a bụ n'ihi na Ypres dị nso, bụ nke dị n'ihu obodo ahụ, bu bombu buru ibu na Vlamertinge nwekwara nnukwu nsogbu site na mbuso agha ndị a.
Ncheta[mezie | dezie ebe o si]
Chọọchị Saint Vedastus
Obodo mbụ nke Vlamertinge site na 1922, na ntinye nke Frans Renaissance
E wuru Castle nke Vlamertinge ma ọ bụ Castle du Parc na 1857-1858 site n'usoro iwu nke Viscount Pierre-Gustave du Parc, mgbe e mesịrị na Joseph Schadde.
Na Vlamertinge, e nwere ọnụ ọgụgụ ndị agha nke agha nke Britain site na Agha Ụwa Mbụ:
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlamertinge&oldid=61541
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 31 Ọnwa mbụ 2018, mgbe 05:53